ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာ သူ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခြေစွမ်း အတိုင်းအတာကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးသာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ တူချယ် - xyznews.co
ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာ သူ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခြေစွမ်း အတိုင်းအတာကို ရောက်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ကြယ်ပွင့် တဦးသာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ တူချယ်
December 2, 2021 - by Editor
ချဲလ်ဆီး အသင်း ဟာ ယနေ့ မနက် က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၄ မှာ တန်းတက် ဝက်ဖို့ဒ် အသင်း ကို ထင်ထားတာ ပိုပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန် ကစားခဲ့ရကာ ၊ ဒုတိယပိုင်းမှာ သွင်းယူခဲ့တဲ့ လူစားဝင် တောင်ပံ ကစားသမား ဟာကင် ဇီယက်ချ်ရဲ့ အနိုင်ဂိုးနဲ့ အတူ ၁ – ၂ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် ။
ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပထမပိုင်း က ကစားပုံ ဟာ ဒီရာသီ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး ကစားပုံလို့ ကင်ပွန်းတပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ ရခဲ့တဲ့ မေဆင်မောင့်ရဲ့ အဖွင့်ဂိုး တဂိုး က လွဲရင် ၊ ကျန်တဲ့ ရှုထောင့် အားလုံးမှာ အိမ်ရှင် ဝက်ဖို့ဒ်ထက် တပန်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို တဖက် တဂိုးစီ သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်းမှ ၅နေရာ အထိ အပြောင်းအလဲ လုပ်ခဲ့ပြီး ၊ ကွင်းလယ်မှာ အဓိက ကစားသမား တဦးတယောက်မှ မပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်း က ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပုံမှန် ကစားကွက် ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ် ။
Chelsea’s Spanish defender Marcos Alonso (R) vies with Watford’s Nigerian striker Emmanuel Dennis (L) during the English Premier League football match between Watford and Chelsea at Vicarage Road Stadium in Watford, north-west of London, on December 1, 2021. – RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. (Photo by Adrian DENNIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120
ပွဲထွက် ကစားသမားတွေထဲ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားခဲ့သူတွေ ဆိုလို့ ၊ တိုက်စစ် က ကိုင်ဟာဗက်ဇ် ၊ မေဆင်မောင့်နဲ့ ဂိုးသမား အက်ဒိုဝါ့ဒ် မန်ဒီတို့လောက်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သီယာဂို ဆေးလ်ဗား ၊ ဟာကင် ဇီယက်ချ် ၊ ရိုမီလူ လူကာကူတို့ လူစားဝင်လာမှသာ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ကစားပုံ သိသိသာသာ တိုးတက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ပွဲအပြီး Amazon Prime ရုပ်သံဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က ယနေ့ မနက်က ဝက်ဖို့ဒ်နဲ့ ပွဲမှာ ဂျာမန် လက်ရွေးစင် ကွင်းလယ် တိုက်စစ် ကစားသမား ကိုင်ဟာဗက်ဇ် တဦးတည်းသာ သူ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခြေစွမ်း အဆင့်အတန်း ကို ရောက်ခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ဒီနေ့ပွဲမှာ ကိုင် ဟာ အထူး စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ တယောက်တည်းပဲ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ခြေစွမ်း အဆင့်အတန်း တခုမှာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရပါတယ် ။ သေချာတာကတော့ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အခြား အသင်းသား အများအပြားကို လွမ်းဆွတ်နေခဲ့ကြတယ် ဆိုတာပါပဲ ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
တဖက်မှာ ဝက်ဖို့ဒ် – ချဲလ်ဆီး ပွဲဟာ ပွဲအစ ၁၀မိနစ် ဝန်းကျင်မှာ ကွင်းတွင်း ပွဲကြည့် ပရိသတ် တဦး ရုတ်တရက် နှလုံး ရပ်ခဲ့တာကြောင့် ၊ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီး ၊ ၁၀ မိနစ်ကျော် အကြာမှာ ပွဲပြန်စနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ အဖြစ်အပျက် ကို ချဲလ်ဆီး ဘယ်နောက်ခံလူ မားကို့စ် အလွန်ဆို က သတိထားမိခဲ့ပြီး ၊ ကွင်းလယ်ဒိုင် ဒေးဗစ်ကု နဲ့ အရန် ဒိုင်လူကြီးကို အချက်ပြကာ ၊ ပွဲကို ခေတ္တ ရပ်နားပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဆေးအဖွဲ့ရဲ့ အချိန်မှီ ရှေးဦး အသက်ကယ် ပြုစုမှုတွေကြောင့် အခုအခါမှာ ယင်း ဝက်ဖို့ဒ် ပရိသတ် ဟာ အသက်ဘေး အန္တရာယ် ကင်းရှင်းနေကြောင်း သိရပါတယ် ။ ထို အခြင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တူချယ် က အခုလိုပဲ ပွဲပြီး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မှတ်ချက်ပြု ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် ။
တူချယ် က ” ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ၊ ဒိုင်လူကြီးတွေထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့ဟာ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ၂ဖက် အသင်း ကစားသမားတွေလည်း ထိုနည်း၎င်းပါပဲ ။ ဆေးအဖွဲ့တွေကလည်း အဲဒီ ပရိသတ် ကို အချိန်မှီ သွားရောက် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီး အသင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူတိုင်း အဲဒီ ဝက်ဖို့ဒ် ပရိသတ် ဘေးကင်းစွာ ရှိနေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ ဒါက အရေးကြီးဆုံး အရာပါ ။ ကွင်းလယ်ဒိုင် က ၂ဖက် အသင်းသားတွေကို အရင်ဆုံး အဝတ်လဲခန်းထဲ သွားဖို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ၊ အခြေအနေ ငြိမ်သက်သွားတဲ့ အခါမှာ သွေးပူ လေ့ကျင့်ခန်း လုံလုံလောက်လောက် ပြန်ဆင်းစေပြီးမှ ပွဲကို ပြန်စခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
Previous Article မာဆေးဆိုက်ဒါဘီရဲ့ ပထမပိုင်းအပြီးမှာ ယာဂန်ကလော့ မှာကြားခဲ့တဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မိုဆာလား
Next Article အမှတ်ထပ်ဖြတ်တဲ့ ရီးရဲ ၊ ဒီဇင်ဘာ အဖွင့်လှတဲ့ EPL အသင်းကြီးများ ၊ နာပိုလီနောက် အမီလိုက်လာတဲ့ မီလန်ညီနောင်တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရအားကစား သတင်းများ